२०७१ पुस २६ गते शनिबार | Saugat : Naya Yougbodh
२०७१ पुस २६ गते शनिबार
10th January 2015	·0Comments
फुचुंग्री : संवैधानिक राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईले पठाएको प्रतिवेदन त सहमति हैन विमतिको भुमरीमा परेर डुलेको डुल्यै पो छ रे नि काका ?
काका : नाम राख्दा तेरा नेता अंकलहरुले अलि जानेनछन् क्या फुच्ची । सहमति समितिभन्दा विमति समिति राखेको भए पो सुनमा सुगन्ध हुने थियो त । नामै गलत राखेपछि फनफनी नघुमेर के गरोस् त ? कि कसो ?
फुचुंग्री : अनि हाम्रा मोहन वैद्य ‘किरण’ बाजेले बुढेसकालमा क्रान्ति गर्ने भनेर छँदाखाँदाको पार्टीलाई टुक्रा पारे । त्यैमाथि वैद्यबाजेको पार्टीलाई पनि नेत्रविक्रम चन्द अङ्कलले फेरि अर्को टुक्रा पारेछन् । अनि राष्ट्रिय सम्मेलन पनि दाङमै गर्न थालेका रै’छन् । चन्द अङ्कलले त क्रान्ति गरेरै छाड्छन् कि क्या हो ?
काका : तेरा नेत्रविक्रम अङ्कलले पहिले तेरा वैद्यबाजेलाई बुरुक्क बुरुक्क उफारे । अनि बूढालाई खाल्डोमा फालेर आफूचाहिं फेरि अर्को पार्टी खोल्नतिर लागेछन् । खै तेरा चन्द अङ्कल उफ्रिन त उफ्रिरहेका छन् क्यारे । अरु जम्मै थला परेर बसेको मौसम छ । जनतालाई पनि उफार्न सके भने केही गर्लान् । नत्र त आफूमात्रै उफ्रिएर के काम ?
फुचुंग्री : हाम्रा केपी शर्मा ओली कामरेडको बोली पनि गोलीभन्दा तगडा रै’छ कि क्या हो काका ? ओली अङ्कलको बोलीले राजेन्द्र महतो अंकल त घाइते भएर ठहरै परे रे ?
काका : तेरा मधेसी अंकलहरु पनि जहाँ गयो निहुँ खोजेर हैरान पार्छन् । दक्षिणतिरका ठूल्दाइको बुइँ चढेका मधेसी नेताहरुलाई तेरा केपी शर्मा ओलीले खै किन बोलीको गोली हाने कुन्नि ? आजभोलि संविधानभन्दा पनि त्यसैको हुँडलो मच्चिएको छ । आखिर तेरा नेता अंकलहरुले काम गर्ने होइनन् क्यारे । जाडोमा दिन काट्ने मेसो राम्रै जुरेको छ ।
फुचुंग्री : हेर्दाहेर्दै माघ ८ पनि आँगनैमा आइसक्यो । माघ ८ मा संविधान जारी होला त साँच्ची ?
काका : उफ् !!! के–के सोध्छे यो फुचुंग्री पनि ???!!!